बजेटमा व्यस्त अर्थमन्त्रीका 'ज्वाइँ', सवा १६ खर्बको बजेट तयारी
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ९ जेठ
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटका लागि अन्तिम तयारीतर्फ उन्मुख छ । अर्थमन्त्रीको ब्यस्तता निकै बढिसकेको छ । कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुन नदिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने चुनौतीमा अर्थमन्त्री छन् । उनलाई पहिलो र दोस्रो बजेट ल्याएजस्तो सजिलो याे तेस्रो बजेट नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री स्वयमले बजेटको स्रोत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा आवश्‍यकता बढ्दै गएको भन्दै चुनौती महसुस गरेका छन् । यद्यपि, खर्च घटाउन सक्ने क्षेत्रतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित नभएको अर्थकै अधिकारी स्वीकार्छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सवा १६ खर्बको परिधिभित्र बसेर ल्याइने तयारी गरिएको छ । संसदको अर्थसमितिले १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
एकतर्फ स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा बजेटको मार्गदर्शनको रूपमा रहने आगामी आवकाे नीति तथा कार्यक्रमले धेरै ठूलो बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अन्तिम तयारीतर्फ उन्मुख रहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले कोर टिममा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीबाहेक तोकिएको कोर टिममा ६ जना छन् । तर, कोर टिमको काममा भने ७ जना ब्यस्त छन्, जसमध्ये नतोकिएर पनि कोर टिममा काम गरेका व्यक्ति हुन्, नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल । उनी नाताले अर्थमन्त्रीका छोरीज्वाइँ हुन् । डा. खरेल खतिवडाको कार्यकालमा ल्याइएका सबै बजेटमा उत्तिकै सक्रिए भएका छन् । आव २०७५/७६, आव २०७६/७७ मा अर्थ मन्त्रालयमा काजमा बसेर नै उनले काम गरेका थिए । अहिले उनी अर्थ मन्त्रालयको काजमा छैनन् तर सक्रिय भने अर्थ मन्त्रालयमा नै छन् ।
अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि १५ फागुन २०७४ मा खरेललाई अर्थ मन्त्रालयमा तानिएको थियो । तत्कालीन समयमा उनले राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशकको रूपमा विराटनगरमा काम गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशन एक वाक्यको पत्र पठाएर उनलाई काजमा अर्थमन्त्रालयमा तानिएको थियो ।
मन्त्रालय बोलाइएका अर्थमन्त्रीका ज्वाइँ राष्ट्र बैंक फर्किए
अर्थ मन्त्रालयमा १६ महिनामा काम गरेपछि १ साउन २०७६ मा राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाइएको थियो । उनलाई अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहारको रूपमा भित्र्याउन खोजिए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति नभएपछि राष्ट्र बैंकमा नै फिर्ता पठाइएकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
डा. खरेल अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको पहिलो र दोस्रो बजेटमा जस्तै प्रस्तुत गर्ने तेस्रो बजेटमा पनि सक्रिय छन् । 'उहाँ पनि बजेट निर्माणमा निकै सक्रियताका साथ खटिनुभएको छ, थोरै धेरै ज्ञान पनि भएको र अर्थमन्त्रीको भाषा पनि बुझ्ने भएका कारणले पनि उहाँलाई सक्रिय बनाइएको हुनुपर्छ,' अर्थका एक अधिकारी भन्छन् ।
खरेल अर्थमन्त्रीले भाग लिने बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय बैठकहरूमा पनि सहभागिता जनाएका छन् । कतिपय बैठक त उनी आफैँले समन्वयन गर्ने गरेको अर्थका अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।
बजेट लेखन कार्यक्रममा पनि आफैँ खटिएर हेरिरहेको बताइएको छ । बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले १० घण्टाभन्दा बढी काम गरिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा आगामी आवका लागि संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, १६:०४:००